बाबा चे ग्वेभाराले हामीलाई जीवनमूल्य सिकाए- एलिडा - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsबाबा चे ग्वेभाराले हामीलाई जीवनमूल्य सिकाए- एलिडा
October 10, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि Breaking News, मुख्य समाचार, विदेश 0
ट्रम्पसित शक्ति छ विवेक छैन
क्युबाका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी नेता चे ग्वेभाराकी छोरीलाई डर छ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पागलपनले मानवा नष्ट गर्नसक्छ। ग्वेभाराको ठूलो छोरी डा. एलिडा ग्वेभारा मार्चले अमेरिकामाथि जनशक्ति मिच्न युद्धको प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएकी छन्।
ग्वेभारा परिवारबाट प्रवक्ताकैरूपमा देखापर्ने 57 वर्षीय एलिडाले क्युबाको राजधानी हवानामा द विक-सितको कुराकानीमा भनिन्, ‘यिनमा मानवा नष्ट गर्ने शक्ति धेरै छ। हामी त्यही मानवताका हिस्सा हौं, समस्या के भने ट्रम्पसित शक्ति छ विवेक छैन।’
तपाईँ दसवर्षपछि क्युबालाई कहाँ देख्न चाहनुहुन्छ? यसको जवाबमा एलिडाले भनिन्, ‘यो त अमेरिकाका राष्ट्रपतिको पागलपनमा निर्भर रहन्छ।’
उनले ट्रम्पतिर सङ्केत गर्दै अझ भनिन्, ‘हामी अनुभूत गर्न चाहन्नौं अथवा गर्दैनौं, कसरी हामी आफ्नै ग्रह नष्ट गरिरहेका छौँ। हामी जुन विध्वंसको बाटोतिर गइरहेका छौं, यो अघिल्लो निष्क्रियता हो। जबसम्म सत्तामा यस किसिमका पागल मानिसहरू बस्छन्, समस्या झन जटिल बन्दै जान्छ।’
भन्छिन् अझ, ‘यो जाग्ने बेला हो, हामी जाग्नै पर्छ, किन भने हामीसित धेरै समय नै छैन।’
चुनाउ अभियानको समय ट्रम्पले क्युबासित फेरि सम्बन्ध स्थापित गर्न 2014 मा तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामाद्वारा गरिएको सम्झौताको आलोचना गरेका थिए अनि सम्झौताबाट पछि हट्ने निश्चय गरेका थिए।
ट्रम्पले क्युबामा नयाँ यात्रा एवं कारोबारमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए। एलिडाले भनिन्, ‘यो प्रतिबन्धले मेडिकल व्यवस्था र प्रौद्योगिकी क्षेत्रमा असर परेको छ।’
उनी महान कम्युनिस्ट थिए
द विक-सित कुरा गर्दै एलिडाले बाबा चे ग्वेभारा सम्झिन्। भनिन्, ‘बाबासित जोडिएको सम्झनाहरू मसित धेरै कम्ति छ। खासमा मलाई डर लाग्थ्यो, उनलाई धेरै देख्न पाउँथिन। उनी घरमा धेरै बस्थेनन्। जब मलाई आमासित सुत्न मन लाग्थ्यो, म बाबा घरमा नभएको बाहना बनाउँथे।
जब बाबा आउँथे, मलाई बोकेर मेरो कोठामा लान्थे। अनि यति जोरले चुम्मा खान्थे कि म त बिउँझिन्थेँ। तपाईँ कल्पना गर्नुस त, एक व्यक्ति जसलाई तपाईं बेलाबखत मात्र भेट्नुहुन्छ अनि उनैलाई अचानक राती देख्नुहुन्छ।
मलाई थाहा छ, उनी एकातिर अनुशासनलाई लिएर गम्भिर थिए, अर्कोतिर धेरै स्नेही पनि। उनले हामीलाई जीवनको मूल्यबारे सिकाए। किताबलाई प्रेम गर्न सिकाए। लेख्नुपढ्नुको अनिवार्यता बुझाए। पशु र मानिस दुवैलाई आदर गर्न सिकाए। तर जिन्दगीले उनलाई यति समय दिएन, कि यी सबै काम उनले आफै गर्न पाउन्। मेरो बाबा यस्ता व्यक्ति थिए, जो जान्दथे प्रेम कसरी गर्नुपर्छ, यसैले उनी महान कम्युनिस्ट थिए।’
टि शर्टमा चे ग्वेभाराः पूँजीवादी समाजको मार्केटिङ रणनीति
टी-शर्टमा देखिने आफ्नो बाबाको फोटोबारे पनि उनले भनिन्, ‘यो पूँजीवादी समाजको मार्केटिङ रणनीति हो। हामी तब लड्छौं, जब उनको छविको आनादार हुन्छ। सिरगेटको खोल, वियरको बोतलमा हुने उनको फोटो हामी स्वीकार गर्दैनौँ। उनको छविमाथिको यस्तो अनुचित शोषण हामी स्वीकार गर्दैनौँ।’
एडिलाले सम्झिन् भारतको हाती
एलिडा 1997 मा गरेको भारत यात्रा अनि त्यहाँ भएको स्वागतका दिन सम्झन्छिन्। भन्छिन्, ‘मलाई कलकत्ता, हैदराबाद अनि कालीकटको यात्रा थाह छ। यहाँका मानिसहरूको व्यवहार धेरै मित्रवत् थियो। जब हामी हवानादेखि भारत आइरहेका थियौँ, तब मेरा छोरीहरू एस्टेफ्निया र सेलियाले मलाई हातीको नक्सा ल्याइदिनु भनेकी थिई। मलाई सम्झना छ, त्यो कालीकट शहर थियो, जहाँ म हातीमा चढेकी थिएँ। कति गाह्रो परेको थियो। उनीहरूले पहिले टेबल राखे, त्यसमाथि टुल राखे अनि म त्यही टुलबाट चढेर हातीमा बस्न सकेकी थिएँ।’
ग्वेभाराका चार सन्तानमा सबैभन्दा ठूलो छोरी एलिडा हवानाको विलियम सोलर चिल्ड्रेन्स हस्पिटलमा डाक्टरी गर्छिन्। कैलेकैले उनी परिवारको प्रवक्ताको काम पनि गर्छिन्। हवानामा नै उनी चे ग्वेभारा स्टडिज सेन्टर पनि चलाउँछिन्। यसबाहेक एलिडा क्युबा र विदेशतिर हुने सामाजिक र सामुदायिक काममा पनि भाग लिन्छन्।
अन्डर-17 विश्वकपमा सिक्किमे कोमलः ठटालमाथि विश्वकै ठूला फुटबल क्लबहरूको गिद्धे दृष्टि